Waist Brace – Rocket Online Shopping
Home ShopHealthWaist Brace
Waist Brace quantity
Category: Health.	Tags: brand new, high quality, kyee pown, pain, Rocket, Rocket Online Shopping, thing, waist brace, က်န္းမာေရး, က်ီးေပါင္း, ခါး, ခါးဆိုဒ္, ခါးနာ, ခါးမနာေစဖို., တင္းေလ်ာ့, နာက်င္မႈ, ပစၥည္း.
Neck Brace လို ခါးအတြက္ က်န္းမာေရး
RocketRocket… တြင္ ဝယ္လို. ရပါၿပီ။
ေႏြးေထြးမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး နာက်င္မႈ သက္သာေစကာ ခါးနာ သက္သာေစမွာ
Length: 107cm (42.0″) It is elastic, You can adjust as you want.
Min Width: 10 cm
Max Width: 16.5 cm
ခါးဆိုဒ္ အားလံုးနဲ. အဆင္ေျပကာ
အလြယ္တကူ တင္းေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပတ္ထားပါက ပူေႏြးေစမည္ျဖစ္ၿပီး နာက်င္မႈကို သက္သာေစမွာပါ။
က်ီးေပါင္းသမားမ်ားနဲ. ခါးနာသူတိုင္း ေဆာင္ထားသင့္တဲ
Waist brace – ၂ေသာင္းက်ပ္
Neck Brace – 15000 kyats
အစံုလိုက္ – 45000 kyats
Neck Brace လို ခါးအတွက် ကျန်းမာရေး
Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။
နွေးထွေးမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး နာကျင်မှု သက်သာစေကာ ခါးနာ သက်သာစေမှာ
ခါးဆိုဒ် အားလုံးနဲ. အဆင်ပြေကာ
အလွယ်တကူ တင်းလျော့ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပတ်ထားပါက ပူနွေးစေမည်ဖြစ်ပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေမှာပါ။
ကျီးပေါင်းသမားများနဲ. ခါးနာသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ
Waist brace – ၂သောင်းကျပ်
အစုံလိုက် – 45000 kyats
Delivery free in Yangon ( မြို.တွင်း ၆မြို.နယ်သာ )
ဝယ်ယူဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို.တွင်း ပို.ခကို ပေးစရာမလိုပါ
⏰Open Time-9am To 5pm(ဆိုုင်ပိတိချိန်တွင် ဖုုန်းများလဲပိတ်ထားပါသည်။)
Sunday နဲ. အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ်
နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ်
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။
09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။
Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ)
ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့်
Be the first to review “Waist Brace” Cancel reply
Gift, Health, Household, Tools
Beauty, Girls, Health
Snake Bit Drill Bit Extender Ks15,000.00 Ks9,000.00
Insta 360 One X Action Camera Ks659,000.00 Ks630,000.00
Easy One Touch Car desk Mount Holder Ks8,500.00 Ks6,500.00
HD Mini Wifi Camera (Eyefish Camera) Ks67,000.00 Ks30,000.00
Car Phone Charging Dashboard Holder Ks17,000.00 Ks9,500.00
Car bed Ks57,000.00 Ks39,500.00
Spine Massager - Posture and Back Support Ks15,000.00 Ks9,500.00
Mosquito Killer Machine(လ်ွပ္စစ္ျခင္ဖမ္းစက္) Ks15,000.00 Ks7,000.00
C1 Plus Sport Fitness Smart Watch